Nhau - otomatiki kufambisa Sandblasting muchina Anoshanda Makuriro
Otomatiki kutapurirana Sandblasting muchina Zvinoshanda Makuriro
Yeplate, ndiro, bhokisi, chimiro uye imwe yakasarudzika-yakaumbwa workpiece sandblasting kugadzira, senge: flat isina simbi simbi, yakajairwa simbi, girazi simbi, dombo, titanium, pani, toast hovhoni, komputa kesi, mashandiro, DVD pani, kabhuku, komputa mamaboard, iron ndiro, yekushongedza, kushambadzira bheji, zvekutaurirana michina, aluminium ndiro, nezvimwe
Muchina wejecha rekutsikisa uyu mhando yekutakura mhando otomatiki sandblasting muchina, iyo inogona kuve yakagadzirirwa uye kugadzirwa zvinoenderana nehunhu hwechigadzirwa chekambani yako. Iine hunhu hwekushanda kuri nyore, kushanda kwakanyanya, dzakasiyana jecha saizi inogona kutsiviwa zvinoenderana neakasiyana maitiro anodikanwa, jecha otomatiki kutenderera kushandiswa, mutengo wekuponesa uye zvichingodaro.
Nekuda kwenjodzi ingangoitika yetsaona dzemoto dzinokonzerwa nemarambi emoto muunganidzi weguruva, zvinofanirwa kudzivirira kusanganisa zvinhu zvinotsva zvakadai sekupukuta flannelette, bepa, guruva rehuni uye upfu hwemagesium ine guruva rinogadzirwa panguva yekukuya kwesimbi.
Pasina mamiriro ezvinhu, vashandisi vezvigadzirwa vanobvumidzwa kukanda midzanga isina kupiswa kana zvimwe zvinhu zvinopisa muguruva rekudzora hoods kana ducts.
Kuti vave vakangwarira, vashandisi veJCK michina vanofanirwa kubvunza uye kutevedzera yenyika uye yemuno makodhi emoto kana mamwe makodhi akakodzera pavanosarudza nzvimbo yekumisikidza iyo precipitator uye vasati vaisa kushanda.
Muchiitiko chekuti mutori weguruva akashandiswa kutora guruva rinotsva kana rinoputika, mutori weguruva anofanira kuiswa kunze kwechirimwa. Uye zvakare, zvakafanira kuti ubvunze kune vanoisa michina yemoto vanoziva nezve tsaona dzemoto dzakadai nemirau yemoto yemuno, uye nekurumbidza nekuisa michina inoenderana nemoto. Iyo inounganidza guruva pachayo haina kushongedzerwa nemidziyo yekurwisa moto.
Mune zvimwe zviitiko, zvinodikanwa kumisikidza kubuda. Nechinangwa ichi, bvunza inishuwarenzi kana bvunza National Fire Protection Association Chinyorwa kuti uone yakaringana nzvimbo yekuputika. Kune iro guruva rekushandisa michina yakaiswa mumusangano, nzvimbo yayo yepamusoro inofanirwa kutungamirwa kune yekunze kudzikisira mukana wekuputika kwechipiri. Naizvozvo, ndokumbira ubvunze kune akakodzera madhipatimendi kuti uone iyo yakakodzera nzira yekuburitsa. Kana uchihodha, kana pasina chakakosha chinodiwa, iro rinobvisa guruva kazhinji harisanganise gonhi rekuyamura kuputika.
Iyo katuriji guruva muteresi inokodzera nzvimbo dzekubvisa guruva pasi peyese tembiricha kuunganidza yakaturikwa guruva nezvimedu. Kunyangwe ichishandiswa pakushandisa kusvibiswa kwemhepo kana sechikamu chegadziriro, iyo cartridge guruva muteresi inogona kuona inoshanda uye ichienderera kuunganidzwa kweguruva.